Ukwakha iitemplate zeComplex ngeHubspot | Martech Zone
Ukwakha iitemplate zeComplex nge Hubspot
NgoLwesibini, Oktobha 6, 2015 NgoMvulo, Matshi 25, 2019 Douglas Karr
Sihle kakhulu xa kufikwa kumaqonga entengiso ezenzekelayo, ukuphuhliswa kwephepha lokufika kunye nentengiso ye-imeyile. Sisebenzile saqinisekiswa Hubspot kwiminyaka embalwa eyadlulayo, kwaye sasichukumisekile zizinto ezithile, kodwa izinto zoyilo zazinomda. Ayisekho imeko leyo.
Omnye wabaxhasi bethu, FatStax, iqale ngo Hubspot kodwa khange ndizisebenzise zonke iinketho. Njengokuqalisa okuninzi, babesebenza kuphuhliso lweshishini kwaye babengenalo ixesha lokuphumeza isisombululo ngokupheleleyo, ke basicela uncedo njengenxalenye yenkqubo yentengiso engenayo. Kwiveki ephelileyo, basungule iNkqubo yamaQabane yeearhente ukuba zibhalise, kwaye yayiyifilimu yethu yokuqala ukwakha itemplate enkulu kubo.
Banikeze ubeko lwe-HTML, kwaye kuye kwafuneka siyiguqulele kwi Hubspot. Bendilumke ekuqaleni, ndibazisa ukuba sizokwenza kangangoko sinokunika inkqubo yokulinganisa Hubspot. Isitshixo sokwenza itemplate yayikukuba sikwazi ukwenza itemplate kwaye siyisebenzisele ezinye izibonelelo kunye namaphepha okufika. Bekufuneka sikwenze ngokuchanekileyo ... ukuze iqela elikwiFatStax lenze ulungiso ngaphandle koncedo lwethu.
Emva kokwazi iqonga kunye nokuchitha ixesha elithile Indawo yeziXhobo zoMyili weHubspot, sichukunyiswe ngokunyanisekileyo kukujongana nomsebenzisi kunye namanqanaba obunzulu. Ngaphandle kokuya kwiinkcukacha, asifumananga sithintelo kwinkqubo yabo yetemplate.
Iziphumo zifuna iitweaks ezincinci, kodwa igqithile kulindelo lwethu (nolwiklayenti). Ngapha koko, ndiyakholelwa ukuba senze enye i-CSS ukuhlela ukwenza ukuba itemplate isebenze ngokupheleleyo- nantsi indlela ebijongeka ngayo:
tags: hubspotUmyili wehubhutemplate yehubbspothubspot templating
Kutheni i-Ecommerce Brands kufuneka ityale imali ngakumbi kwi-Instagram